Fitaovana fikosoham-bary vy namboarina mora vidy ary orinasa mpamatsy | Ouzhan
Ny vy karbonika dia firaka vy-karbonina miaraka amin'ny atin'ny karbaona 0,0218% ka hatramin'ny 2,11%. Antsoina koa hoe vy vy. Amin'ny ankapobeny, izy io dia misy silikônika, manganese, solifara ary phosforus kely ihany koa. Amin'ny ankapobeny, arakaraky ny habetsahan'ny karbaona vy amin'ny karbaona no mampitombo ny hamafiny ary avo kokoa ny tanjaka, fa ny ambany kosa no mampidina ny plastika. Ny fikosoham-bary vy amin'ny karbaona dia manana fampiharana marobe ary mety amin'ny ankamaroan'ny faritra mekanika.
Ny lathes CNC dia afaka manamboatra endrika vatana miovaova. Ho an'ny faritra fikosoham-bary vy, raikitra ny banga, ary fanapahana fikosoham-bary mihodina hafainganam-pandeha no ampiasaina hanetsehana ny banga eo amin'ny banga mba hanapahana ireo endrika sy endrika fiasa ilaina. Ny foiben-toeran'ny milina fitotoam-bary dia tena mety amin'ny fanodinana ireo karazana workpiece toy ny faritra miolikolika sy fitaovana fampitaovana miolakolaka. Ny faritra miolikolika dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny indostria, toy ny turbine blades, propeller sambo, vokatra indostrialy misy tavoahangy vita amin'ny kodiarana, sns. Ouzhan dia manome serivisy fanodinana vy vita amin'ny vy ho an'ny mpanjifa sarobidy.
Tombontsoa amin'ny faritra vita amin'ny vy karbonika Shanghai Ouzhan
Namboarina namboarina vy fikosoham-bary vy fikosoham-bary
Material Rivotra karbaona ambany, vy karbaona antonony, vy karbaona avo, vy manaparitaka maimaimpoana, vy manaparitaka sy vy-fosfor ary vy tsy mangan'ny solifida (votoatin'ny manganese mihoatra ny 1%)
Fitsaboana ambonin'ny tany Ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny vy karbaona dia azo alamina arakaraka ny zavatra takinao, toy ny fipoahana tifitra, sandblasting, rano avo lenta, pickling sns.
Fanaraha-maso kalitao Manomboka amin'ny fitaovana ka hatramin'ny fonosana, voafehy tanteraka ny dingan'ny milina fandrefesana rehetra.
Previous: Mpanamboatra sinoa CNC fangarony vy vy vy
Manaraka: OEM karbonina fikosoham-bary vy machining faritra
OEM faritra vy machining vy vy ho an'ny sta ...